Blockchain News 8 Ndira 2018 - Blockchain News
Blockchain News 8 Ndira 2018
Ron Paul vachanyoresa Bitcoin
Vaimbove Republican Congressman Ron Paul anoti ndiye zvose kuti bitcoin serimwe rinogona kutsiva mari, chero zvose pamusoro dzichipesana, rakapotsa twa iri pamutemo.
Yaimbova Republican Congressman kubva Texas ichangopfuura akayeuchidza CNN kuti paaiva Congress, akatanga mitemo kubvumira kukwikwidza mari nokuti anovenga ano hurongwa.
"Ndinosema hurongwa kuti tine. The pamutemo counterfeiters vari panguva Federal Reserve. Ndiyo misstep uye dambudziko guru guru. Saka vanhu vanofanira kodzero yokusarudza,"Ari Newsmax Insider inoti.
"Vakaita pakutanga apo mari yakatanga. Ipapo vakatora goridhe nesirivha. Uye hurumende atora pamusoro uye kushungurudzwa kuti mureza uye zvakashandiswa nayo. Akariputsa munyika ino,"Akadaro Paul.
"Ndinoda kuti vachanyoresa vose avo kusarudza uye chii vanhu vanoda kushandisa sezvo mari. Asi hapana chitsotsi. Haugoni kuita kubiridzira,"Ari Texas Libertarian akaudza CNN kuti Michael Smerconish.
Ron Paul ari chiremba, munyori, uye aimbova Republican Congressman. Pauro ari maviri-nguva Republican vemutungamiri mumiriri, uye vemutungamiri nominee of Libertarian Party muna 1988 U.S. sarudzo dzemutungamiriri wenyika.
ViaBTC dzokugumisa pamusika racho migodhi zvibvumirano
Chinese bitcoin kuchera dziva ViaBTC akazivisa kuti uchaisa pamusika racho migodhi zvibvumirano vhiki rino, kutama kuti anouya pakati mishumo matsva kurambidzwa nematare munyika.
Mune Jan. 8 statement, ViaBTC akati kuti dzima musika - iyo vanokwanisa kutenga zvibvumirano entitling kuti imwe mari hashing simba (uye akabatanidza cryptocurrency payouts) - ndiye Jan. 10. The chikonzero: Kambani anoda “kudzora kufungidzira uye kudzivirira zvido makambani edu.”
“Ndapota kupedzisa zvose gore mugodhi chibvumirano wako wokutengesera ASAP. Ndinokutendai mose rutsigiro rwenyu,” ViaBTC akawedzera.
ViaBTC kutanga vatanga ayo mugodhi basa gore muna November 2016.
The kuvhara anouya mwedzi pashure ViaBTC akavhara pasi ayo cryptocurrency Exchange papiwa crackdown nemaChina vakuru pamusoro nyika Exchange mararamiro, Maitikiro acho akatanga chete pashure kutanga 2016. Machinda vakatamirawo kurambidza kushandiswa kutanga yesimbi zvinopiwa (ICOs) muna September.
Asi apo pasina pachena chinoratidza kuti zviitiko zviviri zviri inoenderana, ichangobva chiziviso anotevera mishumo itsva kuti vakuru China vanotsvaka zvishoma nezvishoma shutdown mudzimba bitcoin migodhi akavhiyiwa.
Maererano nemagwaro rinoparadzirwa pamusoro kwevhiki uye zvakabatanidzwa Mukusarudza Group of Internet Financial njodzi Remediation, munhu Chinese regulator, machinda vanoda ekuderedza rutsigiro dzemunharaunda miners, anoshevedza matanho kumativi simba uye nyika kushandisa. Mumwe magwaro vakakumbira kuti machinda kugadzirira zvirongwa chakadaro neurongwa rechi10.
A mumiririri kubva Xinjiang nehofisi sangano wacho akasimbisa mapepa wacho veracity kuti Goldstone asi akaramba kupindura mimwe.
Sehumwe kufananidzirwa Bloomberg, miners mu China dziri kuchinja tsoka dzavo kubva kunyika, kuyeva munzvimbo itsva Europe uye North America. The nhau webasa yakataura kuti vakuru China vanoda rokunyora imwe “kurongeka” shutdown of migodhi mararamiro.
California State mutemo ...
Rakuten anotangazve yayo cryptocurrency
mu 2016, ari Japanes ...
North Korea anogadzirira ...
Previous Post:About ICO: Ndiani akaunganidzawo kupfuura mari panguva chiratidzo okutengesa
Next Post:Teregiramu ICO zvirongwa